Izizathu eziqhelekileyo zenze utshintsho OST Ifayile yeNkedama
Ikhaya iimveliso DataNumen Exchange Recovery Izizathu eziqhelekileyo zenze utshintsho OST Ifayile yeNkedama
Izizathu eziqhelekileyo zenza iMicrosoft Exchange OST Ifayile yeNkedama
Ifolda yotshintshiselwano ngaphandle kweintanethi (.ostIfayile ikopi yendawo kunye ne-offline yebhokisi leposi kwi-Exchange server. Nanini na xa ibhokisi yeposi kwiseva ingafumaneki ngokusisigxina, ifayile ye OST Ifayile ibizwa ngokuba yinkedama.
Zininzi izizathu eziza kwenza ifayile yakho Shintsha ifolda engaxhunyiwe kwi-intanethi (.ostifayile iinkedama. Sizihlela ngokwamacandelo amabini, oko kukuthi, izizathu zekhompyutha kunye nezizathu zesoftware.
Nanini na xa izixhobo zakho zekhompyutha zisilele ukugcina okanye ukuhambisa idatha yolwazi lwakho lweServer Exchange (.edb), intlekele yedatha yenzeka kwaye iseva iya kuphazamiseka. Ngela xesha, OST iifayile ziya kuba ziinkedama. Kukho iintlobo ezintathu ikakhulu:
Ukusilela kweDatha yokuGcina uLwazi. Umzekelo, ukuba i-hard disk yakho inamacandelo amabi kwaye i-Exchange Server database yakho igcinwa kula macandelo. Emva koko unokufunda kuphela icandelo lefayile yedatha. Okanye idatha oyifundileyo ayichanekanga kwaye igcwele iimpazamo. Urhwaphilizo lwedatha olunje luyakwenza ukuba isiseko sedatha singafumaneki kwaye sakho OST ifayile iinkedama.
Ukusilela kwaMandla okanye iServer yokuCima ngokungaqhelekanga. Ukuba ukusilela kwamandla kuyenzeka okanye ucima i-Exchange iseva ngokungalunganga xa iseva yoTshintshiselwano ifikelela kuvimba weenkcukacha, oko kunokubangela ukuba ugcino lwedatha lonakele kwaye OST ifayile iinkedama.
Ukungasebenzi kakuhle kweKhadi loMlawuli okanye ukusilela. Ukuba isilawuli se-caching sisetyenzisiwe kunye neServer yokuTshintsha, ukungasebenzi kakuhle okanye ukusilela kuya kubangela yonke idatha egciniweyo lost kunye nenkohliso kwiziko ledatha, ukwenzela ukuba OST ifayile iinkedama.
Kukho iindlela ezininzi zokuthintela okanye ukunciphisa inkohliso yedatha yokuTshintshiselana ngeServer kunye OST ifayile ukuba yinkedama ngenxa yeengxaki zehardware, umzekelo, i-UPS inokucutha iingxaki zokungaphumeleli kwamandla, kwaye ukusebenzisa izixhobo zekhompyuter ezinokuthenjwa kunokunciphisa amathuba okonakala kwedatha.
Kwakhona Tshintshana OST ifayile inokuba yinkedama ngenxa yemicimbi enxulumene nesoftware.
Cima, khubaza, okanye uphike ukufikelela kwibhokisi yemeyile kwiseva yotshintshiselwano. Ukuba ibhokisi yemeyile ekwiServer Exchange ehambelana nefayile ye- OST ifayile iyacinywa okanye ikhutshaziwe ngumlawuli wakho weseva, okanye ukufikelela kwakho kwibhokisi yeposi kuyala. emva koko ibe yeyakho OST ifayile yinkedama kwaye kufuneka uthembele kuyo DataNumen Exchange Recovery ukufumana imixholo yebhokisi yakho yeposi.
Intsholongwane okanye enye iSoftware enobungozi. Iintsholongwane ezininzi ziya konakalisa kwaye zonakalise ugcino lwedatha yoTshintshiselwano kwaye zibenze bangasebenziseki, eziya kuthi zenze ifayile ye OST ifayile iinkedama. Kuyacetyiswa kakhulu ukufaka isoftware esemgangathweni yokulwa intsholongwane kwinkqubo yakho yokutshintsha kweServer.
Ukungasebenzi kakuhle kwabantu. Ukungasebenzi kakuhle koluntu, njengokucima indawo yolwazi ngempazamo, ukwahlula ngokungafanelekanga isixhobo esigciniweyo, ukufomatha ngendlela engalunganga inkqubo yokusebenza, konke kuya kubangela ukuba isiseko sedatha ye-Exchange Server singafumaneki, kwaye ke senze OST ifayile iinkedama.
Lungisa iNkedama OST iifayile:
Xa akho OST iifayile ziinkedama, usengayisebenzisa imveliso yethu yokuphumelela amabhaso DataNumen Exchange Recovery ukuba fumana kwakhona idatha kwi-Exchange yakho eyinkedama OST iifayile, ukuze ufumane kwakhona imixholo yebhokisi yakho yeposi kwakhona.